အဆိုတော် ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေထဲ အကြိုက်ဆုံးသီချင်းများထဲမှာ “ချစ်သူသိစေ”သီချင်းလည်း ပါတယ်။ မဟာဆန်သူ ၊ ရတနာသူ ၊ ဝေးခဲ့ပြီပန်းခရမ်းပြာ ၊ ပန်းချစ်သူ ၊ ဒွိဟစိတ်နဲ့သုညမှာ ၊ ရိုးရိုးလေး ၊ အို ၊ တိတ်တခိုး အစရှိတဲ့ သီချင်းတွေကို သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာ (၇)ရက် အမှတ်တရနေ့အတွက် နူးညံ့သိမ်မွေ့ကဗျာဆန်သော ဒီသီချင်းကို သိပ်နှစ်သက်သော “သူ”အတွက် စာသားလေးတွေပါ နားထောင်ရင်း ရေးဖွဲ့သီကုံးပေးလိုက်ပါတယ်။ချစ်သူသိစေပန်းပွင့်ရှိမှ ရနံ့ရတာမဟုတ်ဘူး ~~ဖူးသည့်တစ်ငုံ ထုံသည့်တစ်ပွင့် ~နမ်းခွင့်တစ်ရှိုက်ရခိုက်မှာ ထာဝရအမြဲတည် ~~နှလုံးသားမှာ စွဲမြဲစွာထုံရစ် ~ ဆွတ်ပျံ့နေ ချစ်သူသိစေ ~တွေ့ခွင့်ရမှ မင်းမျက်နှာလ၀န်း ~ကြည့်ခွင့်တစ်ခါ မြင်ခွင့်တစ်လှည့် ~ မင်းမရှိလည်းစွဲမြဲစွာ~ ဘယ်လောက်ဝေးနေ ~ မော့ကြည့်ရင် မိုးကောင်းကင်လိုရှိ ~တွေ့လို့နေ ချစ်သူသိလေ ~~ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ~~ တွယ်နှောင်ရစ်ငင်အိပ်မက်မှာအစဉ်အမြဲရှိ ~~~ နေရာချင်းလွဲလွဲ ဒေသချင်းကွဲကွဲ ~~ မြင်ယောင်စိတ်အစဉ် အိပ်မက်မှာရှိ ~ဖွင့်ဟပြောမှ ကြားတတ်တာမဟုတ်ဘူး ~ စီးဆင်းတဲ့စိမ့်စမ်းရေ ~ကျေးငှက်တို့တီးတိုးသံ ~~ ချိုစွာကြားရင် မင်းစကားသံ စွဲမြဲစွာကျန်ရစ်~ ကြားလို့နေ ချစ်သူသိလေ ~~~ တွေ့ခွင့်ရမှ မင်းမျက်နှာလ၀န်း ~~ ကြည့်ခွင့်တစ်ခါ မြင်ခွင့်တစ်လှည့် ~~ မင်းမရှိလည်းစွဲမြဲစွာ ~ ဘယ်လောက်ဝေးနေ~ မော့ကြည့်ရင် မိုးကောင်းကင်လိုရှိ ~~ တွေ့လို့နေ ချစ်သူသိလေ ~ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး~ ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ် ~ တွယ်နှောင်ရစ်ငင် ~ အိပ်မက်မှာ အစဉ်အမြဲရှိ ~~ နေရာချင်းလွဲလွဲ ဒေသချင်းကွဲကွဲ ~ မြင်ယောင်စိတ်အစဉ် အိပ်မက်မှာရှိ ~~ ဖွင့်ဟပြောမှ ကြားတတ်တာမဟုတ်ဘူး ~ စီးဆင်းတဲ့စိမ့်စမ်းရေ ~~ ကျေးငှက်တို့ တီးတိုးသံ ~ ချိုစွာကြားရင် ~~~ မင်းစကားသံ စွဲမြဲစွာကျန်ရစ် ကြားလို့နေ ချစ်သူသိလေ ~~Photo Credit to http://screensaver.pe.kr/view/data/category_love/love_wallpaper_111.jpg
အင်း...အချစ်နတ်ဖမ်းစားခံရရင် ပို့စ်ကောင်းလေးတွေ ထွက်တတ်တယ်ဆိုပဲ..မလင်းလက်တစ်ယောက် ဘာတွေဖမ်းစားနေလဲဗျ. :)You are in love....Keep it up........ အားကျလယ်..Y.
ခင်မောင်တိုးသီချင်းတွေကတော့ အမြဲလိုမဟုတ်တောင် အခါတလေ အရမ်းနားထောင်လို့ သီချင်းတွေပါ။ရိုးရိုးလေးနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့စာသားတွေကိုက စွဲလန်းစရာပါပဲ
အဲဒီသီချင်းကို ကျွန်တော်လည်း ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ စာသားတွေက အနက်အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိတယ်လေ။ပန်းပွင့်ရှိမှ ရနံ့ရတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့စာသားကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ညီမလေးရေ...သီချင်းလေးကြိုက်လို့ ယူသွားပြီနော်..ကျေးဇူးအချစ်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ...
very nice mentioned of Ko Khin Maung Toe's songs Linlet !Thanks for sharing.Best,ko myoe.